Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | Aarsaa Kakuu ветви с нового министерства пакта
← Wuyi Waaqayyoof в hojjenna
Jalqaba Jecha маны jedhu Duree как Yoo материи как irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha маны jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan о ISAAA является jijjirama.
Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun бычок национальной ka'amu yookin в колонке в колонке jiraatu jechuudha. Манни qulqullummaa сделать immoo ИКТ abbummaan gaafatummaa в е Вали кан Акка ни о Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Хаа Malee Waaqayyo Тау Akka isaatti qulqulluu Akka тан yeroo hundumaa п barbaada. Kanaaf Akka ани qulqulluu ta isinis qulqulloota Та'а jedhe кан ню abboomeef.
Нути Варри goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka tanee sagaleen Waaqayyo ню hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo эрг taanee ню Waaqayyooti Malee Бийя спокойна Встреча yookiin OFII keenyaa собрания. Командир Кения Waaqayyo ню jaallatee tokkicha меня ИСАА Akka ню fayyinuuf, Subbu сжечь Akka Banuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo с отцом jaallata; nuyis (Воды, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas себя Бира щ Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee ад rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata ад, iddoo jireenya о ISAAA является godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. «Манни qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii дома wajjin galtee Малий qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis не qulqulluummaa isaati.
Kanaaf Waaqayyo Akkas монахиня jedhe: Ани ISIN бира в buufadha, ISIN jiddus из deddeebi'a, Спросите Waaqayyo keessan нан Та'а ISIN Саба Ку эту установку (2Qor.6:16). Nu эрг мана qulqulluummaa Waaqayyo taanee, не hafuurri Waaqayyo keessa boqatu и qulqulluummaati Ni посмотреть сравнение?
Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti Акка Акка ISIN feedha fedha foonitti время jiratan; намни hafuura Кристос из keessaa цене qabne национальной Кристос МВТП (Рим 8:9). Гару ISIN это AKKA не qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; не qulqulluummaa hafuura МСА Миссия taatanii, большинство национальных OFII keessan МВТП. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi не keenyaa qulqullummaa Waaqayyo Тау ад barree qulqulluummati Акка eegnu, кан внутри nuuf kennee собаки Маан волка isaaf ключевой прекрасно козьего qulqulluun ню ​​HAA кричать.
Maqaa Йесус Gooftaatiin; Амин.
Тесфайе Ayyano Тийн
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Комментарии
Addisuu Baqqalaa говорит Июль 18, 2015 в 10:15 в :
Не дай мне Waaqayyoon Играть вред eebbisuu hedduu irraa профессор dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa вред экономике. Gooftaa ayyaana кан дача dachaa isiinif га baayyisu.
Аддис-Абеба Наука и техника irraa
deriba Fufa говорит Может 10, 2015 в 6:44 в :
WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN НАА EBBISUU .
barnotaa станция NUF Лашез jirtuu , Варен создал xummurrat milkaahan ню труда tasisuu(walumman)
Подробнее физика waggaa 1ffaa jimmaa университет
deriba Fufa говорит Может 10, 2015 в 6:38 в :
waaqayyoo goftaan ISIN хаа ebbisuu, ayyanisas класса га bayaatu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani полагаются создали xummurra ти waaqayyoo ISIN действуют gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
barataa физика waggaa1ffaa Джимма университет irraa
Bultuma так говорит Март 12, 2015 в 5:39 в :
baay'ee galatooma Понедельник jechaa,barnootni Йеменский kennaa Прайса тыс baay'ee barbaachisaa akkanni ta'e keessumattuu dhaloota безопасности kanaaf baay'ee это barbachisu ta'uusaa hubannoo hedduu irraa являются argadheetan
Это исследование waggaa lmmaffaa(2)анг. Dhawan радио Universitii Dirre
Проверьте здесь, чтобы Подписаться на уведомления о новых сообщения